Uyenza njani i-SEO yeNgingqi esebenzayo kuhlahlo-lwabiwo mali | Martech Zone
Uyenza njani ngokuSebenzayo i-SEO yeNgingqi kuHlahlo-lwabiwo mali
NgeCawa, uJuni 23, 2013 NgeCawa, uJuni 23, 2013 I-Jayson DeMers
Ixesha elingaphezulu, i-SEO iye yanzima kwaye yangqongqo, kodwa ngaba oko kuthetha ukuba kuyabiza kakhulu? Ayizizo zonke iinkampani ezifuna iinkonzo ze-SEO ezisekwe kwi-Intanethi okanye ezinxulumene ne-IT. Ngapha koko, uninzi uninzi lwamashishini amancinci asebenza kwindawo ethile. Aba bantu bayayidinga SEO yendawo endaweni yesiko, i-SEO yesizwe.
Amashishini endawo kunye nabantu ngabanye - oogqirha bamazinyo, abatywini ngemibhobho yamanzi, iivenkile zeempahla, iivenkile ze-elektroniki- abanayo imfuneko yokubeka kwinqanaba eliphezulu kukhangelo lwehlabathi ukutsala abathengi abavela kwelinye icala lomhlaba, okanye nangaphandle kwemida yabo. Kuphela kufuneka baphume phambili xa umntu ejonga "oogqirha bamazinyo eSeattle" okanye "abatywini eMadison." Kulapho i-SEO yendawo ingena khona.
"Ugqirha wamazinyo seattle wa" ubuyisela ipakethi ezi-7 zewebhusayithi ezisekwe kwindawo
Kuninzi okuye kubhaliwe malunga ne-SEO yendawo kunye nokubaluleka kwayo kwimakethi eqhutywa ngophando lukaGoogle. Ngelishwa, ababaninzi abantu abayiqondayo into yokuba i-SEO yendawo inokwenziwa ngexabiso elincinci kakhulu; kunye nenkcitho encinci etyalomali kwi-SEO yendawo inokujika i-ROI enkulu.
I-SEO yengingqi kufuneka ibe yexabiso eliphantsi kunesiqhelo esila iipakeji ze-SEO ezihlala zithengiswa ziinkampani. Nasi isizathu:
1. Ukhuphiswano oluncinci
Ngephakheji ye-SEO yehlabathi / yesizwe, kuyacaca ukuba ukhuphisana namawaka ezinye iiwebhusayithi (ukuba azikho ngaphezulu) ezivuthayo ngohlahlo-lwabiwo mali olukhulu ukufikelela kwinqanaba eliphezulu. Xa kuziwa kwi-SEO yendawo, ukhuphiswano luyancitshiswa ngokukhawuleza kwimibutho kunye newebhusayithi. Kungenxa yokuba amagama aphambili ojolise kuwo aba “yindawo-ethe ngqo,” yona iluncedo olukhulu (enkosi kwinxalenye yobukrelekrele bukaGoogle).
Endaweni yokukhuphisana neewebhusayithi kwilizwe liphela okanye kwihlabathi jikelele, ngoku ubambene ngokuchasene neqaqobana lamashishini endawo. Amathuba alungile ukuba uninzi lwabo alunalo uncedo lobuchwephesha be-SEO, lushiya ucango luvulekile ukuba uthathe iziphumo zokukhangela.
2. Ukujoliswa kwegama eliphambili ngokulula
Nge-SEO yendawo, kugxilwe kuyo amagama angundoqo we-longtail namagama aphambili akhethekileyo. Endaweni yokuzama ukubekwa kumagama aphambili “oogqirha bamazinyo,” nge-SEO yalapha uyakube ujolise "kugqirha wamazinyo eSeattle," etshintsha yonke inxaki yokhuphiswano kunye nokujoliswa kwegama elingundoqo. Ngamagama aphambili akude kunye namagama aphambili ekujoliswe kuwo, ukhuphiswano lwamagama aphambili luye lwancitshiswa kakhulu, lwenza kube lula ukukhuphisana kunye nokufezekisa amazinga aphezulu.
Ingxelo kaMicrosoft ngo-2010 yathi abasebenzisi be-smartphone banakho ukutshintsha ngokukhawuleza. Kulo nyaka, uNielsen uxele ukuba malunga neepesenti ezingama-64 zokukhangelwa kwiindawo zokutyela ze-smartphone eziguqulwe kwiyure nje enye. Inqaku elibalulekileyo apha kukuba zonke ezo zinto ibizezokukhangelwa kwendawo kuluhlu lwasekhaya. Amashishini endawo afumana amaqondo angcono okuguqula iziphumo zophando lwasekhaya. Oku akusebenzi nje kuphela kwi-ecosystem ye-smartphone kodwa kuzo zonke izixhobo ezisetyenziswa ngabantu ukukhangela kuGoogle uluhlu lweshishini lwasekhaya.
Inye kuphela into ebalulekileyo ekufuneka uyiqaphele kukuba iinguqu zibonisiwe ukuba ziyeke kabukhali xa amaphepha elayisha kancinci; Abasebenzisi beselfowuni banomonde omncinci wokulinda ukuba iiwebhusayithi zilayishwe. I-CDN (yomxholo wenethiwekhiUkubamba ibonelela ngesona sisombululo sisiso ekupheliseni ukulayisha kancinci amaphepha kunye nokwenza ngcono amazinga okuguqula.
4. Ukulungiswa okuNcinci
Ngokungafaniyo ne-SEO yesiko, i-SEO yendawo ngakumbi malunga nento eyaziwa ngokuba "ziingcaphuno" -ingakhankanyi ikhonkco ngegama lakho lophawu, idilesi, kunye nenombolo yefowuni, imizekelo yayo ibandakanya ukudweliswa kwizikhombisi kunye nokufumana uphononongo olulungileyo. Ukuphosa iindlela ezimbalwa zemveli ze-SEO njengebhlog kunye noluhlu lweekhonkco ezisemgangathweni kwiiwebhusayithi zalapha ekhaya ngokuqinisekileyo ziyanceda, kodwa ezi kukucofa ikhekhe. Olona manyano lusebenzayo kwiphepha elikwiphepha nakwiphepha elingaphandle- kulula kwi-SEO yendawo xa kuthelekiswa ne-SEO yesiko.
5. Izisombululo eziLungiselelwe
Kulapho iye ibengcono ngakumbi. Njengakwiinkonzo zemveli ze-SEO, apho ingcali inokufumana izixhobo ezahlukeneyo kunye nezixhobo zokulawula inkqubo ngokufanelekileyo, kukho iinkonzo ezinje Isicatshulwa seWhitespark, Yext (ezenza zize zilawule izicatshulwa kwi-plethora yemikhombandlela), kunye nezinye izixhobo zokuncedisa kwimizamo ye-SEO yendawo.
Kuba uninzi lweenkampani ze-SEO zalapha zisebenzisa ezi nkonzo zidumileyo, ziphumeleleyo, kunye nokuvavanywa kwexesha, ixesha lotyalo-mali elifunekayo ukufezekisa iziphumo lingaphantsi kakhulu kune-SEO yesiko.
6. Iziphumo ezikhawulezileyo
Iziphumo kwi-SEO azinakuqinisekiswa, kodwa ababukeli abaninzi bayavuma ukuba iinzame ze-SEO zalapha ekhaya zifumana iziphumo ezikhawulezayo. Into ebangela umdla kukuba, azininzi iiwebhusayithi (kunye namashishini abo) abayiqondayo inzuzo yokufumana iziphumo ezikhawulezayo kwimizamo yabo ye-SEO: oku kuthetha ngempumelelo inkcitho encinci, kuba ixesha liyimali.
Uninzi lweenkampani eziqhelekileyo ze-SEO ziyaqhubeka nokwenza iinkqubo de zibe neziphumo ezithembekileyo zokubonisa abathengi bazo. Ekugqibeleni, bayamhlawulisa umthengi ngaphezulu kakhulu kunokuba bekunokuthi kuthathwe ukufezekisa ezo ziphumo. Ukuya kuthi ga kwinqanaba elikhulu, oku kunokuthintelwa nge-SEO yendawo.
7. I-ROI kunye neenkqubo eziqhubekayo
Ngokungafaniyo ne-SEO yesiko, i-SEO yendawo ine-ROI ephezulu kakhulu. Kungenxa yokuba uninzi lwamashishini endawo ngababoneleli beenkonzo zomzimba, kwaye abantu abafuna iinkonzo kwisixeko esithile kunokwenzeka ukuba bajike babe ngabathengi ngokukhawuleza. Ngokhuphiswano oluncinci (kwiimeko ezininzi), amathuba angcono okufakwa kuluhlu lweGoogle kunye nezinye iinjini zokukhangela, kunye newebhusayithi elungiselelwe, amashishini endawo anokufumana ngokulula into "ethembekileyo".
I-SEO yengingqi ayilahlekelwanga ngamathuba okwenziwa emva kokulungiswa. Umntu kufuneka agcine iliso rhoqo kwizinga, ukwandisa, kunye nokuphinda iinkqubo ezithile, kodwa ezi zihlala zingenabunzulu kwaye zininzi kunokuba zifunwa yi-SEO yesiko.
Izixhobo eziSimahla okanye ezinokuThengiswa kwi-SEO yaseKhaya
1. Isixhobo segama eliphambili kuGoogle Adwords
Kunokubakho okungcono, izixhobo ezizezona zityebileyo ngamagama aphambili, kodwa kuzo zonke iinjongo ezisebenzayo, ezikaGoogle Isixhobo segama elingundoqo uphendula ezona mfuno ziphambili zophando. Isixhobo sinokuguquguquka kwaye silunge ngakumbi ukuba ufuna ukhuphiswano olusekwe kwindawo kunye nedatha yevolumu yokukhangela.
2. Uluhlu lweZalathiso neeWebhusayithi
Kukho amakhulu ezalathiso apho ungafumana khona "ukubhalwa," into ebalulekileyo ekubekeni amagama aphambili kwindawo ethile. Ekupheleni konyaka ophelileyo, uMales waqulunqa enkulu Uluhlu lwemithombo yokucaphula kumashishini ase-US nase-UK. Uninzi lwayo lusabambe okuhle.
Khumbula i-SEO trinity yendawo: Iindawo zikaGoogle, iBing Local, kunye neYahoo! Indawo. Fumana iwebhusayithi yakho kunye neshishini elidweliswe ngeenkcukacha ezipheleleyo kwezi. Emva koko yongeza imithombo yocaphulo kwiresiphi yakho kwaye ubukhulu becala usete.
3. KwiziCatshulwa noHlolo
Uvavanyo lukaGoogle lwezicatshulwa luyeyona nto iphambili yokufumana amanqanaba aphezulu. Nangona kunjalo, uphononongo ludlala indima ebalulekileyo. Iiwebhusayithi ezinje Yelp zithandwa ngokusekwe kwiindlela zokuphonononga. Uninzi lweziphumo zamagama aphambili endawo avela kuluhlu lweYelp lwasekhaya elinoluphononongo olukhulu.
"Indawo yokuhlala yamazinyo" - Jonga kwisiphumo sokuqala. Ivela kuYelp.
UGoogle ulumke kakhulu. Ayaneli kufunda izicatshulwa kuphela kodwa iyayazi nendlela yokufunda ubalo lokujonga kwakhona. Ukuphonononga ngakumbi, ngcono ithuba lakho lokubonisa phezulu.
Ukufumana uphononongo akukho nzima ukuba uthatha ixesha ukubuza abathengi bakho bangaphambili nabangoku, izihlobo, kunye nosapho ukuba luphonononge uluhlu lwakho lweshishini (kwiiwebhusayithi ezininzi kangangoko kunokwenzeka). Kodwa ke, awufuni ukwenza ngaphezulu koku.
4. Kwiphepha elungiselelwe
Phantse wonke umntu uyayithetha le nto: Ukuba ishishini lakho linedilesi ebonakalayo, yibeke kwiphepha ngalinye lewebhusayithi yakho (ngokukhethekileyo kwi-footer). Yenza idilesi oyisebenzisayo ihambelane kuzo zonke iiwebhusayithi kunye nemikhombandlela odwelise kuyo. Iifowuni nazo zibalulekile. I-Yext.com ilungile ekuqinisekiseni ukungqinelana kuzo zonke izikhombisi.
5. Imidiya yokuncokola
Ukongeza idosi esempilweni yokuzibandakanya kwimidiya yoluntu yenye yezona zinto zibalaseleyo onokuzenza kwimizamo yakho ye-SEO yendawo. Imithombo yeendaba kwezentlalo iya isiba yinto eyoyikisayo kwi-SEO kunye nentengiso, ke kubandakanya oku kwiresiphi yakho ye-SEO yendawo ngumbono omkhulu.
Ukuba ishishini lakho lixhomekeke ikakhulu kubathengi basekhaya, i-SEO yendawo yitikiti lakho kuhambo oluphezulu lwewebhusayithi kunye nokubonakala kuGoogle. Iindleko akufuneki zibe ngumqobo ekusebenziseni iinzame zakho zokufumana amanqanaba aphezulu kuGoogle-onokuba ngowona mthombo uphambili wabathengi bakho abatsha kunye namashishini ngakumbi.
tags: ukukhangela kwendawoyendawo seoenjini yokukhangela noun
Iindlela ezimfutshane zokuKhangela kuGoogle kunye neParameter
Ukujonga kwikamva ledijithali loRhwebo
Juni 24, 2013 ngo-6: 41 AM
Ubonise i-seo yendawo njengeyona ndlela ibhetele nefikelelekayo. Enkoso ngokwabelana….
Juni 24, 2013 ngo-7: 26 PM
Iposti emnandi, uJayson!
Juni 25, 2013 ngo-12: 17 PM
Juni 27, 2013 ngo-8: 47 PM
Ndicinga ngokunyanisekileyo ukuba bonke abanini bamashishini abancinci kufuneka batyale imali kuluhlu lwasekhaya, zininzi izixhobo ze-seo onokuzisebenzisa okanye unokukhupha intengiso yakho ye-SEO le yindlela entle yokufumana ukubonakala kwi-Intanethi
Agasti 27, 2013 kwi-7: 42 AM
Oku kuya kunceda kakhulu ukwenza imisebenzi ye-seo
Okt 7, 2013 ngexesha 7:58 AM
Ndicinga ukuba i-SEO kunye neNkonzo yezeMidiya yoLuntu yinxalenye ebalulekileyo yeNtengiso yeDijithali. Kuwo onke amaShishini sidinga iinkonzo ezinje ngokwenza uphawu kunye nokwenyusa. Uluhlu lwendawo kaGoogle lukwayinxalenye ebalulekileyo yentengiso yasekhaya.
Ikati yeWebhu yoyilo
Ngomhla wama-14 ku-Disemba 2013 ngo-5: 08 AM
Enye yeendlela ezilungileyo zokufumana i-seo yendawo kunye nabantu basekuhlaleni nokuba yeyiphi na imisebenzi.
Ngomhla wama-2 ku-Disemba 2015 ngo-1: 47 PM
Ibhlog enkulu malunga "nendlela yokwenza ngempumelelo i-SEO yendawo kuhlahlo-lwabiwo mali". Ndizifumene ezi ngcebiso zibaluleke kakhulu ukunceda ukukhulisa ishishini lam lasekhaya ndisebenzisa i-SEO. Enkosi kwakhona! 🙂